रबिन्द्र अस्ताय, अब के होला वाइडबडी काण्ड ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
रबिन्द्र अस्ताय, अब के होला वाइडबडी काण्ड ?
बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको निधन भएको छ । पाथिभरा माताको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा हेलिकोप्टरमा अचानक आगलागी भएको थियो ।
आगलागीग्रस्त हेलिकोप्टर पहाडको कुनामा खसेर धेरै समयपछि मात्रै फेला परेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जुझारु नेता अधिकारीले कास्कीबाट संविधानसभाका दुईवटा र प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन जितेका थिए । कास्कीको पृथ्वीनारायण क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पनि भएका थिए ।
अखिलको अध्यक्ष हुँदै आफ्नो राजनीतिलाई थप उचाइमा पु-याएका अधिकारी पहिलो पटक मन्त्री भएका थिए । यसअघिको संविधानसभामा विकास समितिको सभापति भएर केही काम गरेका उनलाई पछिल्लो समयमा विकासप्रेमी नेताका रुपमा लिने गरेका थिए । तर पनि उनी पूर्णरुपमा दोषमुक्त हुन भने सकेका थिएनन् ।
पछिल्लो समयमा वाइडबडी विमान किन्दा भएको घोटालामा उनको नाम जोडिएको थियो । विमान किन्दा भुक्तानी गर्ने कुरामा उनले कुनै पनि प्रश्न नगरेको र जस्ताको तस्तै पठाएपछि त्यहाँभित्र पनि केही चलखेल भएको गुनासो हुँदै आएको थियो । संसदका विभिन्न समितिमा समेत उपस्थित भएर उनले आफ्नो तर्फबाट कुरा राखेपनि यो काण्डमा भने उनी पूर्णरुपमा चोखो हुन पाएका थिएनन् । वाइडबडी काण्डमा मन्त्री अधिकारीको नाम जोडिएपछि भएको आलोचनाले उनलाई राजनीतिमा थप असहज पैदा हुँदै गएको थियो ।
नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष मदन खरेलको पनि संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तर सँगसँगै उनी मन्त्री भएपछि विभिन्न जिल्लामा विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढेको र रात्रीकालिन उडान पनि संचालन गरेको र अन्य विकासका काम पनि गरेको प्रशंसा गर्न लायक काम हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले सानै उमेरदेखि राजनीति गर्दै आएका थिए । शुक्रबारको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री अधिकारीको वाइडबडी काण्डमा कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन् । तर ओलीले यस घटनामा अरु केके भएको र दोषी को हुन् भनेर भने प्रष्ट पारेनन् । यो काण्डमा पूर्वमन्त्रीहरु, सचिव लगायतको संलग्नता भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।
घट्टेकुलोमा सिलिन्डर नभइ बम नै विस्फोट भएको पुष्टि